LOZA TANY ARIVONIMAMO :: Hanomboka anio ny fakàna am-bavany an'ireo naratra • AoRaha
LOZA TANY ARIVONIMAMO Hanomboka anio ny fakàna am-bavany an’ireo naratra
Raha tsy misy ny fiovana farany dia hanomboka anio ny fakàna am-bavany ireo naratra sy niharam-boina tamin’ilay loza namoizana ain’olona efatra, afak’omaly, tany Andranomena-Arivonimamo. “Hisy zandary alefa any Antananarivo hijery ireo izay maratra efa mba afaka miresaka hahafahana manomboka ny fakàna am-bavany”, hoy ny avy amin’ny Zandarimaria any Arivonimamo, izay miandraikitra ny famotorana.
Hatomboka amin’ireo maratra aloha, araka izany, ny fanadihadian’ireo mpanao famotorana. Ny havan’ireo namoy ny ainy voalaza fa mbola miandry ny fahatongavan’izy ireo avy mandevina vao halaina am-bavany. “Tsy an-tery ny fakàna am-bavany fa izay afaka miresaka no hanaovana fitanana an-tsoratra. Miankina amin’ny toe-pahasalaman’ilay naratra ny fihainoana azy”, hoy ihany ireo mpanao famotorana.
Nosintonina, omaly, avy ao ambany tetezana kosa ilay fiara kamiao-taksiborosy nitondra olona miisa valo amby enimpolo, araka ny nolazain’ny minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, afak’omaly alina, teny amin’ ny Hjra. Tsy mbola fantatra hatreto ny anton’ity loza ity na olana teknika na antony hafa. Ny fanambaràna ofisialy avy amin’ireo mpikambana ao amin’ny governemanta tonga teny amin’ny Hjra no nahafantarana fa fandehanana mafy no niteraka ny loza.
ASAN-JIOLAHY MAHERY VAIKA :: Ankizy roa nisy naka an-keriny
FIFANDONANA NITERAKA RATRA :: Frantsay iray sy Malagasy iray voaheloka higadra folo taona